ဘိုးအင်း 747-200 DOWNLOAD, Mega အထုပ် Vol.3 FSX & P3D - Rikoooo
ဘိုးအင်း 747-200, Mega အထုပ် Vol.3 FSX & P3D
အရွယ် 130 ကို MB
downloads ရယူရန္ 18 022
စီမံကိန်း Opensky, သူ Mike Maarse, Devyn Silverstein, လူးဝစ် Quintero အားဖြင့် Repack
ဘိုးအင်း 747-200 Mega ပက်ကေ့ Volume ကို 3
ဤတွင်ဘိုးအင်း 747 အလွန်အမင်းအသေးစိတ် 8 ကြီးမြတ် packages များခွဲခြားအားလုံး၎င်း၏ပုံစံများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ volume ပါရှိသည် 29 repaints အရည်အသွေးမြင့်သူတို့ရဲ့မော်ဒယ်အရသိရသည်ခွဲခြား။ အင်ဂျင်တစ်ခုစီအတွက်မှန်ကန်သောနှင့်စိတ်ကြိုက်အသံများပါ ၀ င်သည်။ အလွန်ကြီးစွာသော add-on 747 ၏ပရိသတ်များသည်။
မော်ဒယ်နှင့် Virtual cockpit :
(ထိုကွဲပြားခြားနားတဲ့အင်ဂျင်ရွေးချယ်စရာသို့ဝေယူသော 12 ဘိုးအင်း 747-200 မော်ဒယ်များပါဝင်သည်General Electric, Rolls-Royce နှင့် Pratt & Whitney) နှင့်သူတို့၏မျိုးကွဲ (-200F, -200M & -200SF).
ဤ volume တစ်ဦးရဲ့ Virtual cockpit (VC ကို) ဆံ့မပါဘူး ကြောင့်ဇာတိနှင့်မ FS2004 ဖြစ်ခြင်းဟာမော်ဒယ်များမှ FSX.
ဘိုးအင်း 747-200F: (14 liveries)
AirBridgeCargo လေကြောင်းလိုင်း / ကုန်တင်ခလေကြောင်းလိုင်း / Cargolux / ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် / Martinair
MK လေကြောင်းလိုင်း (4 liveries) / နိပွန် Cargo လေကြောင်းလိုင်းများ / အနောက်မြောက်လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် / အနောက်မြောက် Orient ကုန်တင် / တော်ဝင်ဂျော်ဒန်ကုန်တင် / ပျံကျား
ဘိုးအင်း 747-200M: (5 liveries)
တောင်အာဖရိကလေကြောင်းလိုင်း (4 liveries) / VARIG
Atlas Air လေကြောင်းလိုင်း / Cathay ပစိဖိတ်ကုန်တင် / FedEx / အာရုံစိုက် Air လေကြောင်းလိုင်း / ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင်
Kalitta Air လေကြောင်းလိုင်း / MK လေကြောင်းလိုင်း (2 liveries) / အနောက်မြောက်လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် / UPS - မန်ယူကှကျန်ဆောင်မှုများ
ခါတိုင်းလို Stuff နှင့် extras :
တစ်ဦး aircraft.cfg ထိပ်ကနေအောက်ခြေကို edited ဖိုင်, (လေယာဉ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်လျှော့ချသောအလေးချိန်နှင့်လောင်စာမြားအပါအဝငျ) fixed အများအပြား bug တွေနှင့် 23 ပိုကောင်းတဲ့အတှေ့အကွုံရှိခြင်းများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းအဖြစ်အပိုအမြင်ချင်း။
အဆိုပါစီမံကိန်း Opensky 747, IIS တွေအများကြီးကြိုက်တယ်သည့်မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုယူနစ် (GSU) ဝန်ဆောင်မှုပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ကိုသက်ဝင်ဖို့ပိုညွှန်ကြားချက်အဘို့, Readme file ကိုဖတ်ပါ။
download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်အားလုံး volumes ကိုများစာရင်း:
ဘိုးအင်း 747-400, Mega အထုပ် Vol.5 FSX & P3D
ဘိုးအင်း 747-8XX, Mega အထုပ် Vol.7 FSX & P3D
ဘိုးအင်း 747-XXX က Mega အထုပ် Vol.8 FSX & P3D
Author: စီမံကိန်း Opensky, သူ Mike Maarse, Devyn Silverstein, လူးဝစ် Quintero အားဖြင့် Repack
အဘို့အ FSND ဘိုးအင်း 727-200 FSX-SP2